I-Taiwan kunye neBurkina Faso ziqhekeza ubudlelwane bezopolitiko phakathi koxinzelelo lwase China
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Taiwan kunye neBurkina Faso ziqhekeza ubudlelwane bezopolitiko phakathi koxinzelelo lwase China
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseBurkina Faso • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Taiwan iqhawule ubudlelwane neBurkina Faso emva kokuba ilizwe lase-Afrika lisithi linqumle ubudlelwane balo kunye nesiqithi esizimeleyo, utshilo uMphathiswa Wezangaphandle wase-Taiwan uJoseph Wu ngoLwesine.
UWu uvakalise ukuzisola ngesi sigqibo, kwaye wongeze ukuba iTaiwan ayinakho ukukhuphisana nezixhobo zemali zase China.
I-China ithi esi siqithi asinalungelo lokwenza ubudlelwane obusemthethweni nelinye ilizwe langaphandle.
I-Taiwan kunye ne-China bakhuphisane nempembelelo kwilizwe lonke kumashumi eminyaka, bahlala bexhoma iiphakheji zoncedo phambi kwamazwe ahlwempuzekileyo.
IBurkina Faso lilizwe lesibini ukushiya iTaiwan kwiiveki nje ezimbalwa. IRiphabhlikhi yaseDominican itshintshele ingqalelo eBeijing ekuqaleni kwale nyanga, ishiya esi siqithi sinamahlakani oonozakuzaku abali-18 kwihlabathi liphela.
Umongameli wase-Taiwan u-Tsai Ing-wen uthe inyathelo le-China kwilizwe lonke lilandela "inkqubela phambili yakutshanje kwezoqoqosho nakwezobudlelwane bezokhuseleko ne-US kunye namanye amazwe acinga".
“[I-Mainland] i-China ichukumise eyona nto iphambili kuluntu lwaseTaiwan. Asizukuyinyamezela le nto kodwa sizimisele ukufikelela kwihlabathi, ”utshilo uTsai.
Uye wongeza ukuba iTaiwan ayizukuzibandakanya kwidiploma yozakuzo - ukuhambisa abo bangaba ngamadlelane ngemali yoncedo- kukhuphiswano nelizwekazi.
Akuzange kucace kwangoko ukuba iBurkina Faso neBeijing bazokuseka ubudlelwane bezopolitiko kodwa uWu wathi inokuba "kungekudala okanye kamva" kwaye "wonke umntu uyazi [ilizwekazi] i-China kuphela kwento".
E-Beijing, uMphathiswa Wezangaphandle uxele kwingxelo ukuba uyasivuma isigqibo seBurkina Faso.
"Siyayamkela iBurkina Faso ejoyine intsebenziswano yase China-Afrika ngobuhlobo kwangoko ngokusekwe kumgaqo-China omnye," utshilo u-Lu Kang.